SOLUTION kukanganisa "com.google.process.gapps maitiro amira" | Gadget nhau
Maitiro ekugadzirisa iyo "com.google.process.gapps maitiro amira" kukanganisa
Ignatius Room | | Nhare mbozha, Software, Tutorials
Imwe yematambudziko iyo Android yagara yakatarisana nayo kubvira payakasvika pamusika, yanga iri yekuenderana nemidziyo kwayakaisirwa, nekuti haina kugadzirirwa yakanangana neyakaomarara Hardware, sezvazviri neApple yeIOS uye iyo iPhone. Izvi, uye hapana zvimwe, ndiro dambudziko hombe vanogadzira vanosangana naro pavanogadziridza zvishandiso zvavo kushanduro nyowani, kubvira kwete chete ivo vanofanirwa kukwidziridza iyo Android vhezheni kune avo zvishandisoAsi ivo zvakare vanofanirwa kuwedzera iyo inofara rukoko rwekusarudzika.
Asi kunyangwe zvakadaro, tinogona kugara tichiwana kumwe kusashanda, kungave nekuda kweiyo Android vhezheni iyo isina kunyatso gadziridzwa kune yedu terminal modhi, kana nekuda kweyakagadziriswa maitiro. Imwe yemakanganiso akajairika inokanganisa ese mashandisirwo uye mashandiro eiyo terminal. Muchikamu chino isu ticha tarisa pane Gadzirisa kukanganisa "com.google.process.gapps maitiro amira", kukanganisa uko muzviitiko zvakawanda hakutibvumire kurodha kunyorera kubva kuGoogle Play Store.
Iko kukanganisa kwakatanga kuoneka mu = Android Kitkat 4.4.2 uye kubva ipapo zvinoita sekunge vakomana paGoogle havana kunetsekana nekuwana mhinduro isingamanikidze vashandisi kuti vatore internet, nekuti kunyangwe mushanduro dzichangoburwa dze Android At iyo nguva yekunyora ichi chinyorwa tiri pa Android 8.0 Oreo, ichiri chinopfuura chinodzokororazve dambudziko mumatemu mazhinji. Pazasi isu tinokupa iwe mhinduro dzakasiyana padambudziko iri, kunzvenga mhinduro yakaoma nguva dzose iyo inosanganisira zvakaoma kugadzirisa zvakare chigadzirwa uye kubvisa zvese zvirimo.
1 Bvisa cache yekushandisa iyo inotipa matambudziko
2 Bvisa maazvino maapps awakaisa
3 Delete izvo zvazvino nyowani zvaunotora
4 Dzorerazve zvido zvepurogiramu
5 Delete data kubva kuGoogle Play masevhisi
6 Fekitori reset kifaa
Bvisa cache yekushandisa iyo inotipa matambudziko
Kana kukanganisa uku kukaitika nguva dzese nguva yaunovhura application, zvingangoita kuti iko kunyorera kuri iko kuri iko kubondera nehurongwa, saka danho rekutanga ratinofanira kutora ndere bvisa cache yacho.
Kuchenesa cache yekushandisa, isu tinongofanirwa kuenda kuZvirongwa> Zvishandiso uye sarudza chishandiso chiri mubvunzo. Kana tichidzvanya pairi, hatiende kuzasi uye tora pane Bvisa cache.
Bvisa maazvino maapps awakaisa
Kana isu tikawana dambudziko muchikumbiro chaive chakaiswa pane yedu kifaa kwechinguva, zvinokwanisika kuti iri mu yekupedzisira kunyorera takaisa, Chinhu chinosiririsa chakajairika pane Android.
Kugadzirisa iri dambudziko rekushanda, chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche sunungura chishandiso, zvimwe zvakananga kuburikidza neZvirongwa> Zvishandiso, kana kuburikidza neyechitatu-bato kunyorera izvo zvinotibvumidza isu kuti tiite iri basa.
Delete izvo zvazvino nyowani zvaunotora
Kana kubva zvataisa iko kunatsurudzwa, iko kwatanga kutiratidza iwo meseji, dambudziko rinogona kuwanikwa mu yekupedzisira kugadzirisa yeapplication yatakaisa, saka kutonga kunze kwezvinetso, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kusunungura izvo zvitsva.
Kuti tibudise zvidzoreso, tinodzokera kuZvirongwa> Zvishandiso uye sarudza application iri mubvunzo. Pamusoro, isu tinowana iyo Force yekumira sarudzo uye Uninstall zvigadziriso. Nokusarudza iyo yekupedzisira, chishandiso chedu chinobvisa chero chiratidzo chekupedzisira kugadzirisa uye chinosiya chishandiso sezvazvaive pakutanga, pachakashanda nemazvo.
Dzorerazve zvido zvepurogiramu
Mhinduro yekupedzisira yatinofunga, tisati tapinda mune chii ingangove iko kunokonzera dambudziko uye kuti haina hukama nezvikumbiro zvakananga, asi kune iyo system, isu tinokwanisa kumisazve zvido zvesarudzo. Kuti udzore zvaunofarira zvekushandisa tinoenda kuZvirongwa> Zvishandiso uye tinya pane All tebhu.
Tevere, tinoenda kumenyu iri mukona yekumusoro yekurudyi kwechiratidziro, inomiririrwa nematombo matatu akatwasuka, uye sarudza Dzosera zvaunofarira. Tisati tasimbisa maitiro, Android inotiratidza meseji inosimbisa kuti zvido zvevose vakaremara kunyorera, zviziviso zvevakaremara maapplication, kunyorera kwekutadza zviito, kumashure kwedatha mvumo yezvikumbiro uye zvese mvumo mvumo.
Kana tangoita maitiro aya, uye tavimbisa kuti mashandisiro akatipa matambudziko akashanda sei zvakare, tinofanira zvakare seta iwo marongero ayo ega Chikumbiro chega chega chaive, sekugona kuwana nzvimbo, nharembozha ...
Delete data kubva kuGoogle Play masevhisi
Kana mushure mekuyedza dzese dzakapfuura sarudzo, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti dambudziko harigare mumashandisirwo pachawo, asi kuti tinoiwana mumasevhisi eGoogle Play. Google Play Services ndiyo Android system application iyo inobvumidza kuve neyese system application gara uchikwiridzira uye ivo zvakare vanoona kuti zvese zvinoshandiswa zvinogara zvichishandurwa kune yazvino vhezheni inowanikwa.
Nekuita izvi maitiro, zvese zvido uye marongero akagadzwa muGoogle Play anodzimwa kudzoreredza marongero ekutanga. Kudzima iyo data kubva kuGoogle Play masevhisi, tinoenda kuZvirongwa> Zvishandiso uye tinya paGoogle Play Services. Tevere tinoenda Kudzima data, mukati meChikamu chekuchengetedza uye tinosimbisa kubviswa kwe data rese kubva kuichi chishandiso zvachose.
Fekitori reset kifaa
Kana pasina imwe yeidzi nzira inogadzirisa com.google.process.gapps dambudziko, zvinokwanisika, kunyange zvisingaite, kuti dambudziko riri mu yekupedzisira kugadzirisa chishandiso chakagamuchirwa, saka kuti tizvitonge, tinofanirwa kugadziridza chigadzirwa. Nekuita izvi maitiro, chishandiso chinodzokera kuiyo yekutanga vhezheni yeApple iyo yawakauya kuzotengesa.
Kuti tidzorere fekitori yezvigadzirwa, isu tinofanirwa kuenda kuZvirongwa> Backup uye kumisazve uye sarudza iyo Fekitori dhata yekumisikidza sarudzo. Maitiro aya achabvisa zvese zvinoshandiswa, pamwe neese mapikicha uye data riri muchiteshi, saka kutanga pane zvese isu tinofanirwa kunyora kopi yedhata rese ratiri kuda kuchengeta, kunyanya mifananidzo nemavhidhiyo atakatora. nemudziyo, kubvira gare gare hapazovi nenzira yekuvadzosa a posteriori, kune akawanda maficha atinoyedza.
Imwe sarudzo yekuita kopi iyi kupinda mu memory memory pane chishandiso uye fambisa yese mifananidzo nemavhidhiyo, pamwe ne data, iro ratiri kuda kuchengeta, kuitira kuti tidzokere paruoko patinodzorera chigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Nhare » Nhare mbozha » Maitiro ekugadzirisa iyo "com.google.process.gapps maitiro amira" kukanganisa
Mhoroi, ini ndinowana iko kukanganisa asi hazvitombonditenderi kuti ndipinde marongero kana chero kupi nekuti meseji inoonekwa zvakare ... Saka mhinduro yaunopa mune ino foramu haina basa kwandiri. Iko kune fomula yekumisazve iyo fekitori piritsi pasina kuisa chero sarudzo nekuti ini handioni imwe mhinduro ... kana iwe uchiziva chero ini ndingafarire iyo kana iwe ukakwanisa kundibatsira
Ini ndinobvumirana nekwekutaura kwakapfuura, uye tsananguro yavanopa haina kana musoro nekuti kana dambudziko riripo nderekuti haripe mukana nekuti chikumbiro chakamiswa, hazvina musoro zvaunotaura nekuti munhu anopinda sei kudzima cache data, kana chishandiso chimwe nechimwe chinotaurira chinhu chimwe chete,
Ini ndinobvumirana nekwekutaura kwakapfuura, uye tsananguro yavanopa haina kana musoro nekuti kana dambudziko riripo nderekuti haripe mukana nekuti chikumbiro chakamiswa, hazvina musoro izvo zvaunotaura nekuti kupinda kunoita munhu kudzima cache data, kana imwe neimwe application inotaurira chinhu chimwe chete, mmmmm
Iwo akanakisa Amazon madhiri anhasi (31-01-2018)
HTC inorasikirwa nedhipatimendi reR & D mukutsinhana $ 1.100 bhiriyoni